Telegram vs WhatsApp: nke ka mma? | Nzukọ mkpanaka
Edere Ferreno | | Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet, telegram
Otu WhatsApp Telegram. Nke a bụ otu ntụnyere ma ọ bụ ọgụ a na -ahụkarị n'etiti ndị ọrụ na gam akporo na iOS. Ngwa ozi abụọ a bụ ikekwe ama ama na ama ama n'ahịa, yana nde ndị ọrụ ọ bụla. Mgbe ị na -ahọrọ otu n'ime ngwa ndị a, ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ịma nke kacha mma n'ime ha.
N'okpuru, anyị na -agwa gị karịa gbasara ngwa ozi abụọ a, ka ị mara nke ka mma. Enwere akụkụ ụfọdụ na nyere aka chọpụta nke ka mma, na ọgụ a nke WhatsApp vs Telegram, mana n'ọtụtụ oge ọ ga -adaberekwa n'ihe onye ọ bụla na -achọ na ngwa ndị a ịhọrọ nke kacha mma.
1 Nzuzo na nche
2 Ọrụ na nkata
3 Oku na oku vidiyo
4 Nkwado Multiplatform
6 WhatsApp vs Telegram: nke bụ ngwa izi ozi kacha mma
Otu akụkụ kachasị mkpa na nke a WhatsApp vs Telegram bụ nzuzo na nchekwa. Ngwa abụọ ahụ nwere izo ya ezo na njedebe na nkata. N'ihe banyere WhatsApp ọ bụ ihe dị na nkata niile, ebe na Telegram ọ bụ ihe dị naanị na nkata nzuzo, a na-ezochi nkata nkịtị, ọ bụghị njedebe na njedebe. N'ezie, nkata nzuzo ndị ahụ bụ otu igodo ụdị a.
Telegram na -agbakwụnye mgbakwunye nchekwa na nzuzo na nkata nzuzo ndị a. Mkparịta ụka in-app a anaghị ekwe ka nseta ihuenyo, yabụ ihe niile ekwuru na nkata ahụ na-adịgide na nkata ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na -arụkwa ahụigodo ahụ n'ime ọnọdụ incognito, ka ewepụtaghị ntụnye ma ọ bụ chekwaa ihe edere. Otu njiri mara kpakpando na nkata nzuzo a bụ na ha na-ebibi onwe ha. Anyị nwere ike họrọ ogologo oge ọ ga -ewe tupu ehichapụ ozi. Yabụ na -ehichapụ ihe niile na onweghị onye nwere ike ịnweta ozi ndị ahụ.
Ma WhatsApp na Telegram na -enyekwa ohere mkpọchi nkata site na iji okwuntughe ma ọ bụ akara mkpisi aka, ụzọ ọzọ iji chebe nkata gị. Na mgbakwunye, n'ihe banyere Telegram ị nwere ike iji ngwa ahụ na -enweghị nọmba ekwentị, ihe anyị gosirila gị. Yabụ na ọ bụ ụzọ ọzọ iji ngwa ahụ n'ụzọ nzuzo mgbe ọ bụla. WhatsApp bụ ngwa ebe ejikọtara akaụntụ ahụ na nọmba ekwentị ma ị nwere ike ịgwa naanị ndị echekwara na akwụkwọ ekwentị gị. N'ozuzu, Telegram bụ nke na -enye anyị ọtụtụ nhọrọ na nzuzo, na -eme ka ọ zuo oke.
Ọrụ na nkata
Akụkụ nke abụọ na WhatsApp vs Telegram na -ezo aka na nkata n'onwe ha. N'ọnọdụ abụọ anyị na -ahụ ngwa ozi abụọ, na -enye anyị otu ọrụ na nkata. Ọ ga -ekwe omume inwe nkata mmadụ n'otu n'otu na izipu ozi ederede na ha abụọ. Na mgbakwunye, ha abụọ nwere nkwado maka izipu ndetu ọdịyo ma anyị nwere ike ịkpọ oku na oku vidiyo (otu na otu).
Telegram emeela akwụkwọ mmado otu n'ime akara ya, enwere ọtụtụ ngwugwu ihe mmado animated. Nke a bụ ihe WhatsApp depụtaghachiri na anyị na-ahụ karịa na ngwa Facebook nwere. Ha abụọ na -enye anyị ohere izipu emojis nkịtị, yana GIFS. Izipu njikọ na -arụ ọrụ n'otu aka ahụ na anyị abụọ nwere ike ịhụ vidiyo n'ụdị PiP.
A bịa na izipu faịlụ, Telegram bụ ngwa na -enye anyị nhọrọ ndị ọzọ. Ngwa ahụ na -enye gị ohere izipu faịlụ buru ibu, ruo 2GB n'ibu. Nke a na -eme ka ngwa ahụ dị mma ma ọ bụrụ na anyị ga -eziga vidiyo ma ọ bụ foto n'ụdị RAW, dịka ọmụmaatụ. Na mgbakwunye, na ngwa anyị nwere nkata ozi echekwara, nke anyị nwere ike iji dị ka saịtị ma ọ bụ saịtị ndetu anyị ma ọ bụ naanị ịchekwa foto nke anyị achọghị ka anyị funahụ.
Oku na oku vidiyo
Ngwa abụọ a na -akwado oku olu na oku vidiyo, ha abụọ n'otu n'otu. WhatsApp na -enye anyị ohere Oku vidiyo otu yana ihe ruru mmadụ asatọ sonyere na mkpokọta. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ọtụtụ mmadụ, anyị nwere ike iji Rooms Messenger, nke enwere ike itinye na ngwa. Mana ọ bụghị ihe sitere na ngwa ahụ n'onwe ya, yabụ maka ọtụtụ ndị ọrụ ọ bụ ihe enwere ike ịhụ dịka mmachi.
Telegram webatara ọkpụkpọ vidiyo n'afọ gara aga, njirimara nke ndị ọrụ ji mmasị na -eche ogologo oge. Na mbido oku vidiyo ndị a bụ naanị ndị mmadụ, mana ọnwa ole na ole enwere nkwado n'ikpeazụ maka oku vidiyo otu. Na mgbakwunye, ngwa a akarịala WhatsApp na ọnụọgụ ndị sonyere, site na nkwado oku vidiyo ruru mmadụ 30. Ị nwere ike ịnwe karịa, mana ọ bụrụ na ọ ga -abụ naanị nkata olu, na -enweghị igwefoto.
Agbanyeghị na ha ewerela ogologo oge ịbịarute, na ntụnyere a nke WhatsApp vs Telegram ọ dị ka o doro anya na ọ bụ nke abụọ mara ka esi eme ya nke ọma. Ọ na -enye anyị oku vidiyo na nkwado maka ọtụtụ mmadụ, ihe na -eme ka otu nnukwu enyi nwere ike iji ya. Na mgbakwunye na enwere ike iji ya na gburugburu agụmakwụkwọ ma ọ bụ ọrụ, mgbe ị ga -ekwurịrị ihe n'otu, dịka ọmụmaatụ.
Enwere ike iji WhatsApp na Telegram na kọmpụta, ihe ịrụ ụka adịghị ya na -eme ka ha nwee ahụ iru ala. Agbanyeghị na ụzọ ha si arụ ọrụ dị iche. WhatsApp nwere ụdị nke ya na ihe nchọgharị, kpọọ WhatsApp Web. Dị ka ọ dị taa, na -echere mmalite nkwado ọtụtụ ga -abata, ụdị nke ihe nchọgharị a dabere na ekwentị. Oge mbụ anyị banyere, anyị ga -enyocha koodu QR. Na mgbakwunye, mgbe anyị chọrọ iji WhatsApp Web anyị ga -agba mbọ hụ na ekwentị nwere ịntanetị, ma ọ bụghị na ọ gaghị ekwe omume iji ngwa ahụ.
Telegram na -enyekwa anyị ohere iji ya na PC, n'agbanyeghị na nke gị ọ bụ site na ngwa. Anyị nwere ike ibudata ụdị Telegram maka kọmputa anyị (dakọtara na Windows ma ọ bụ Mac). N'ime ngwa a, anyị ga -enwe ike ịnweta otu akaụntụ anyị nwere na ekwentị anyị, si otu a na -ejikọ ha abụọ n'ụzọ dị mfe. Anyị nwere ike iji ngwa ahụ na PC na -adabere na nke anyị nwere na ekwentị. Yabụ na anyị nwere ike ịkparịta ụka oge ọ bụla anyị chọrọ na ụdị a, ọbụlagodi na anyị chefuru ekwentị anyị n'ụlọ ma ọ bụ n'ọrụ, dịka ọmụmaatụ.
Eziokwu ahụ na ụdị desktọọpụ anaghị adabere na ekwentị bụ ihe dị mma nke ukwuu, nke na -enye onye ọrụ ọtụtụ nnwere onwe. Yabụ na ngalaba a na ntụnyere nke WhatsApp vs Telegram, ọ bụ ọzọ nke abụọ na -ewere isi. Agbanyeghị na nke a bụ ihe ga-agbanwe ma ọ bụ kwalite maka WhatsApp mgbe ha mechara malite nkwado ọtụtụ ngwaọrụ ha, nke ga-ekwe ka ụdị a na kọmputa ghara ịdabere na mkpanaka. Nke a bụ ihe ndị ọrụ na -atụ anya kemgbe.
Nhazi onwe onye bụ akụkụ ọzọ ị ga -eburu n'uche na ntụnyere a nke WhatsApp vs Telegram. Ndị ọrụ gam akporo na iOS nwere ekele maka inwe ike ịhazi akụkụ dị iche iche nke ngwa ahụ. Telegram na -enye anyị ọtụtụ nhọrọ na nke a, ebe anyị nwere ike budata isiokwu ka ịgbanwee ọdịdị ya n'ozuzu ya nke ngwa. Na mgbakwunye, nhọrọ isiokwu anyị nwere ike ibudata sara mbara nke ukwuu, yabụ ị nwere ike họrọ isiokwu dabara adịrị ụtọ gị oge niile.
Anyị nwekwara ike hazie ọdịdị nkata ahụ, na -ahọrọ ego anyị chọrọ inwe na ya. Nke a bụ ihe anyị nwekwara ike ime na WhatsApp, nke nwere ọtụtụ nhọrọ dịnụ ruo oge ụfọdụ iji gbanwee ndabere nke mkparịta ụka na ngwa ahụ. Ọ bụ maka agba siri ike, yabụ na ọ bụghị mgbanwe ma ọlị, mana opekata mpe ọ bụ ụdị nkeonwe anyị nwere ike iji na ekwentị mkpanaaka.
Ngwa abụọ a nwere nkwado maka ọnọdụ gbara ọchịchịrị, ihe dị mkpa n'ezie na gam akporo. Yabụ ọ bụrụ na nke a bụ ihe na -echegbu gị, n'ihi na ọ kaara gị mma n'ụzọ a iji ngwa ahụ na ekwentị gị, na ngwa abụọ ọ ga -ekwe omume. N'ozuzu, anyị nwere ike ịhụ na ọ bụ Telegram na -enye anyị nhọrọ nhazi nke ukwuu, yabụ ewepụtara isi okwu a.
WhatsApp vs Telegram: nke bụ ngwa izi ozi kacha mma
Ọ bụrụ n'ị gụọ n'etiti ngalaba dị iche iche anyị kpọtụrụ aha n'isiokwu a, ị ga -ahụ nke ahụ Ọ bụ Telegram pụtara dị ka ngwa izi ozi kacha mma na ntụnyere a. Nke bụ eziokwu bụ na n'ọgụ a nke WhatsApp vs Telegram, ọ bụ ngwa izi ozi Russia kacha mma. Ọ na -enye anyị nhọrọ ndị ọzọ na nkata ya, ọ nwere ike ịhazi ya nke ukwuu, ọ bụ ngwa echekwara yana nke nwere desktọpụ nke na -adabereghị na ngwa mkpanaka, ihe doro anya na -eme ka ọ dị mfe iji.
WhatsApp bụ aka ngwa ozi kacha ewu ewu gburugburu ụwa, mana ọ na -ahụ Telegram na -enweta ala. Ọdịda ya na -eme ka Telegram nweta ọtụtụ nde ndị ọrụ. Na mgbakwunye, ọtụtụ nkatọ nke amụma nzuzo ya na mpụga EU emeela ka ọ kwụsịkwa ndị ọrụ. Yabụ, n'agbanyeghị na ọ bụ ngwa nke ọtụtụ ndị ọrụ na -eji ugbu a, ntakịrị ntakịrị anyị na -ahụ ka Telegram si enweta ahịa n'ahịa ma na -eme onwe ya ka ọ bụrụ ihe kachasị mma na WhatsApp.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » telegram » Telegram vs WhatsApp: nke ka mma?
Otu esi etinye paswọọdụ na faịlụ Windows 11